Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → décembre → 30 → Fetin’ny faran’ny taona : Nivadika ho sakoroka ny fizarana fanomezana tao amina minisitera iray
Sakoroka no niafaran’ny fizarana fanomezana faran’ny taona, ho an’ireo mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, Fiompiana, ary ny Jono natao tetsy Ampandrianomby ny harivan’ny 24 desambra lasa teo. Nifandrombahana no niafaran’ilay akoho izay saika hozaraina, satria nisy olona avy any ivelany tafiditra tao an-tokotany ; izay nanaovana ny fizarana. Nitranga izany noho ny fisian’ny toe-javatra tsy dia mazava loatra tamin’ireo mpiasa, hoy ny fanazavan’ny solotenan’ireo sendikalista mpiasa ao amin’io minisitera io, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety. Araka ny fanazavana, dia tsy araka ny fandaminana efa napetraka ny fanatanterahana izany fizarana fanomezana izany. Nomena fotoana izahay, hoy ireto mpiasa ireto, fa amin’ny 10 ora no tsy maintsy hizara izany ny Minisitra. Efa nanantena zavatra tokoa ireo mpiasa ka tamin’ny 8 ora sy 30 minitra dia efa tonga teny an-toerana avokoa, satria araka ny fantatra dia tokony handray 100 000 ariary avy izy ireo. Tonga ny tamin’ny 10 ora. Mbola tsy nisy na inona na inona na dia efa teo aza ny Minisitra. Araka ny nambaran’izy ireo, dia ny Talen’ny Fandraharahana ara-bola eo anivon’ity minisitera ity no niandraikitra ny fikarakarana ity raharaha ity. Voalaza ary, fa « panier garni » no hozaraina tamin’io. Nony tonga ny tamin’ny 12 ora sy 30 minitra. Akoho 200 no tonga teo. Nozarain’ny Minisitra aloha io fa nolazaina fa mbola hisy ho avy eo. Niandry ny mpiasa. Akoho 200 ihany indray no tonga tamin’ny 5 ora sy sasany hariva. Ora izay efa nivoha ny vavahady tamin’io. Gaga ireto mpiasa, fa toa tsy araky ny isan’izy ireo izay mahatratra hatrany amin’ny 1600 ireto zavatra nozaraina. Tsy nitsahatra hatreo, fa ny 26 desambra dia nomena 65 000 ariary avy izy ireo. Manahy noho izany ireto mpiasa ireto, fa toa tsy araky ny nampanatenaina no noraisin’izy ireo. Nankaiza ary, hoy ny fanontaniana ny elanelana izay tokony hameno ny sandan’ny 100 000 ariary isan’olona. Fa ny tena olana amin’ity raharaha ity dia ny fisiana tomponandraikitra iray miampanga ireo mpiasa ho nangalatra akoho tamin’ilay fifanjevoana, ny hariva ny 24 Desambra. Tsy hahazo fanavaozana « contrat » intsony, hoy izy, izany olona izany raha mbola ECD, ary hafindra toerana raha efa fônksiônera.
Kamilà 2 janvier 2020 at 17 h 07 min · Edit
Sady mampalahelo fa dia « miady an-kanina ». Ilay izy koa aloha tsy « droit » fa « faveur » raha azoko tsara. Fa hatrany an-tampony ka hatreny ambany indrindra, dia mbola ny fanambanin’ny pyramide de Maslow aloha no mampisakoroka an-dRamalagasy. Mandritra ny enim-bolana mbola hitohy ny alahelon-kanina t@ izay …
Rodrick 30 décembre 2019 at 15 h 51 min · Edit
Ny lohany no matsatso dia tsy mahagaga raha hatsatso hatrany @ ambany
Efa nilaza foana aho hoe: tsy misy hazo ratsy (Rajoel) hamoa voa tsara izany
rakoto 30 décembre 2019 at 14 h 10 min · Edit
Mahamenatra . Efa miomàna hianao ry mpisolo-toerana ny Ministra ,fa tena manalabaraka ny mpitondra izao tsy fahaiza-mitondra izao .Efa manomboka sahady ny fizarana vola nefa ny vahoaka mahantra tsy mihinan-kanina .Ny SINOA mandrimpaka ny trondro andranomasina ,ny SRI-LANKAIS manjono tsy nahazo alalana any Atsimo andrefana ,etsetra etsetra .